Sida ku cad dib u habaynta fasaxa waalidka, lacag maalmeedka waalidka waxaa loo codsan karaa qayb-qayb ahaan laga bilaabo 1.5.-ee qorshayso fasaxaaga waalidka, adigoo isticmaalaaya aaladda sida ootomaatigga ah wax u xisaabisa (laskuri) - News archive for customers - kela.fi
Sida ku cad dib u habaynta fasaxa waalidka, lacag maalmeedka waalidka waxaa loo codsan karaa qayb-qayb ahaan laga bilaabo 1.5.-ee qorshayso fasaxaaga waalidka, adigoo isticmaalaaya aaladda sida ootomaatigga ah wax u xisaabisa (laskuri)
Dib u habaynta lagu sameeyay fasaxa waalidka waxaa uu isbeddel ku samaynayaa fasaxa waalidka iyo muddada lacag maalmeedka waalidka iyo xilliga la bixinaayo. Dib u habayntaan waxaa ay khuseysaa qoysaska waqtiga dhalashada ilmaha loo qabtay ay tahay 4.9.2022 ama wixii ka dambeeya.
Sida ku cad dib u habaynta lagu sameeyay fasaxa waalidka, lacag maalmeedka waalidka waxaa mustaqbalka lagu magacaabayaa lacag maalmeedka uurka ee gaarka ah, lacga maalmeedka uurka iyo lacag maalmeedka waalidka. Gunnooyinkaas waxaa ay khuseeyaan qoysaska ay waqtiga dhalashada ilmaha loo qabtay tahay 4.9.2022 ama wixii ka dambeeya, iyo sidoo kale marka ilmaha adhabshanka loo soo qaatay daryeelka la siiyo ugu horreyn 31.7.2022. Lacag maalmeedka uurka iyo lacag maalmeedka waalidka ee waalidka uurka leh, waxaa la codsan karaa 1.5.2022. Lacagta gaarka ah ee uurka iyo lacag maalmeedka waalidka ee waalidka kale waxaa la codsan karaa laga bilaabo 1.8.2022. Gunnooyinka waxaad ka codsan kartaa qaybta internetka ee Kela-da OmaKelassa.
Lacag meelmeedka waalidka waxaa suuraggal ah in si siman loogu kala qaybiyo labada waalid- iyadoo aan xaddidnayn oo caawimaad u ah nololmaalmeedka qofka
Sida badan lacag maalmeedka waalidka waxaa la isticmaalayaa muddo 320 maalmood oo maalmaha shaqada ah. Haddii ilmuhu uu leeyahay laba waalid, si iskumid ah ayaa fasaxa loogu qaybinayaa labada waalid, taaasoo loola jeedo in labada waalidba ay haystaan 160 maalmood oo maalmaha shaqada ah. Waalidka uurka leh waxaa maalmahaas wali u sii dheer 40 maalmood oo lacag maalmeedka uurka ah ka hor inta aanu u wareegin lacag maalmeedka waalidka. Qaybtaada adiga kuu gaarka ah ayaa haddii aad ku heshiisaan waxaad ugu badnaan 63 maalmood ka siin kartaa waalaidka kale ama qofka kale ee carruurta daryeelaaya.
Lacag maalmedka waalidka ee qayb ahaanta ah iyo fasaxa waxaa ay keenayaan shaqo aan xadidnayn iyo in si wadajir ah looga heshiiyo fasaxa waalidka, waxaana uu arrinkaas suuraggal ka dhigayaa tusaale ahaan samaynta shaqo maalin barkeed ama saacado yar ah. Hal qayb ahaaneed oo lacag maalmeedka waalidka ah waxaa ay cadadka lacag maalmeedka waalidka ka qaadanaysaa maalin barkeed.
Waalidku waxaa ay mustaqbalka qaadan karaan 18 maalmood oo fasax maalmaha shaqada ah oo isku mar ah. Lacag maalmeedka waalidka waxaa ay u isticmaali karaan sida ay doonaan illaa iyo waqtigaas, tan iyo inta uu ilmuhu ka buuxinaayo laba sano, ama daryeelka ilmaha adhabshanka lagu soo qaatay ay ka soo wareegtay laba sano.
– Sida ku cad qaabkaan cusub waxaa gunnooyinkan la codsan karaa bilowga bisha Maajo, iyadoo la buuxinaayo foomamka cusub ee macaamiisha loogu talaggalay ee internetka ku jira. Waxaa samaynta arrinkaas sahlaaya muuqaalo hagis ah oo netka ku jira iyo aaladaha kala duwan ee sida ootomaatigga ah wax u xisaabiya (laskuri). Sidoo kale waxaan warbixinta arrinkaas ku saabsan soo raacin doonnaa baakadka hooyannimada ee cusub iyo buugaagta yaryar ee macluumaadka ku qoran yihiin ee Kela-da oo loogu talaggalay qoysaska carruurta leh, sidaasna waxaa sheegtay Kiti Laitinen oo ah agaasimaha qaybta gunnooyinka qoysaska carruurta leh ee Kela-da.
Qorshee oo kaga hadla arrinka ku saaban fasaxa waalidka goobta shaqada iyo gurigaba
Aaladda sida ootomaatigga ah u xisaabisa lacago maalmeedka uurka iyo waalidka (Raskaus- ja vanhempainrahapäivien laskuri) waxaa ay fududaynaysaa qorshaynta fasaxa waalidka. Aaladda waxaa lagu xisaabin karaa waqtiga la heli karo ama la qaadan karo lacag maalmeedka waalidka iyo tan uurka. Macluumaadka aaladda ay ku siiso waxaad kaga faa’idaysan kartaa, marka aad shaqo bixiyaha kala hadlayso arrinka ku saabsan fasaxa waalidka.
Dib u habaynta lagu sameeyay fasaxa waalidka waxaa ay saamayn ku yeelanaysaa goobta shaqada iyo neefolada. Kela-du waxaa ay soo saartay xogo warbaahineed oo luqado kala duwan ku qoran, kuwaasoo loogu talaggalay in lagu caawiyo shaqo bixiyaha iyo qofka wadashaqayntu idinka dhexeyso.
– Neefolooyinka iyo goobaha shaqada waxaa ay door weyn/muhiim ah ku leeyihiin arrinka ku saabsan dib u habaynta fasaxa walidka, waayo waa meelaha ay waalidku ka helayaan macluumaadka ku saabsan fasaxa waalidka. Fasaxa waalidku waxaa si aan sinnayn uu ugu kala qaybsan yahay waalidiinta. Dib u habaynta lagu sameeyay fasaxa waalidka ma ahan dib u habayn u taalla oo kaliya xafiiska Kela, ee waa isbeddel la doonayo in heer bulshada oo dhan ah looga wada qaybqaato, si markaa fasaxa waalidku uu mustaqbalka u noqdo mid si simman uga dhexeeya waalidka, waxaa sidaas sheegtay Milla Vainio oo ah khabiir dhanka warbaahinta u qaablisan Kela-da.
Farxadda ugu wanaagsn, waa tan la wadaago -Ololahaan waa mid lagu qaybinaayo macluumaad, iyadoo la adeegsnaaayo kannaalo kala duwan
Ololaha xayaysiinta luqadaha kala duwan ku qoran ee ku saabsan dib u habaynta fasaxa waalidka waxaa uu bilaaban doonaa horraanta bisha Maajo. Ololahaan waxaa si ballaaran loogu gudbin doonaa kannaalo kala duwan, ujeedada laga leeyahay ololahaan waa sidii qoysaska carruurta leh iyo kuwo rajaynaaya in ilmo u dhashaan loo siin lahaa macluumaad waafi ah oo ku saabsan dib u habynta fasaxyada waalidka iyo sida uu qoyska ugu soo kordhinaayo arrimo badan oo aan xaddidaad lahayn.
Sharciyada cusub iyo kuwii hore ee ku saabsan fasaxyada waalidka waa ay iska garab shaqayn doonaan illaa iyo dhammaadka sannadka 20224. Sharcigii hore ee degsanaa waxaa la waafajinayaa, marka xilliga loo qabtay dhalashada ilmaha ay tahay kahor 4.9.2022.
Dibuhabaynta fasaxa waalidka – Lacag maalmeedka waalidka waxaa lagu samaynayaa dibuhabayn (pdf)